ဖရန်စစ် ဖူကူယားမား| September 12, 2012 | Hits:4,827
| | ပြီးခဲ့သည့် သြဂုတ်လ အတွင်းက မြန်မာနိုင်ငံသို့ လာရောက်ပြီး ဟောပြောပွဲ ပြုလုပ်နေသည့် ဒေါက်တာ ဖရန်စစ် ဖူကူယားမား (ဓာတ်ပုံ – ဧရာဝတီ)
စစ် အာဏာသိမ်း ၂၆ နှစ်အလွန် အိမ်ပြန်လမ်းအစိုးရ ခေါင်းဆောင်နေရာ စစ်ခေါင်းဆောင်တို့ အတွက်သာစစ်တပ် အာဏာသိမ်းတာ ၂၆ နှစ်ပြည့်ပြီစကော့တလန် လွတ်လပ်ရေး၏ အဖိုးအခစောမူတူးစေးဖိုး ဘာမှားလို့လဲ
bama September 12, 2012 - 9:28 pm nice review.
Reply bama September 12, 2012 - 9:38 pm — လောဘသား တရုတ်နုိုင်ငံ — လို့ Fukuyama က တော့ ပြောမယ် မထင်။
Reply min min September 12, 2012 - 10:17 pm မြန်မာပြည်မှာမှန်ကန်ဖြောတ့်မတ်တဲ့အာဏာရှင်ခေါင်းဆောင်ပဲလိုအပ်ပါတယ်အခုမြန်မာတွေ
Reply Maung Maung September 13, 2012 - 2:27 pm ဒေါက်တာဖရန်စစ် ပြောတာတွေ ထင်မြင်ယူဆတာတွေ အားလုံး သွေးထွက်အောင်မှန်ပါတယ်။ တကယ့်ပညာရှင်ပီသပါပေတယ်။ ယူအာရိုက် သင့်ကျူး လိုပဲ ပြောလိုက်ချင်ပါတယ်။ အဲဒီအခြေအနေမှန်ကို ဒီကနေ့မြန်မာပြည်ရဲ့ အတွင်းအပြင်က နိုင်ငံရေးလုပ်နေကြသူများထဲက ၉၅ % လောက်က မမြင်ကြတော့ဘူး။ ရလာတဲ့ မဖြစ်စလောက်အခြေအနေကို သာယာပြီး လူလုံးပြ အာကျယ်အာကျယ်လုပ် လူအထင်ကြီးအောင် တောင်လှုပ်ရှား မြောက်လှုပ်ရှား ဟိုအယူအဆတွေ ပြော ဒီအယူအဆတွေ ဝေဘန်နဲ့ သောက်ရမ်းကြီးကို ပျော်မြူးနေကြတယ်။ စေ့စေ့ကြည့်ကြစမ်းပါ။ လက်ရှိအစိုးရလုပ်နေတာတွေနဲ့စစ်တပ်က ရပ်တည်တဲ့ အနေအထားနဲ့ သေချာကြည့်ရင်မြင်ရပါတယ်။ လိုအပ်တာတွေ ကမ်းကုန်အောင် လုပ်ပေးမယ်။ မတော်မတည့် တောင်းဆိုတာတွေ ဖြစ်နိုင်သမျှလုပ်ပေးမယ်။ နောက်ဆုံး လူတွေ က အလိုလောဘ အတောမသပ် ဖြစ်လာရင် ပြသာနာဖန်တီးလိုက်မယ်။ ပြီးရင် တိုင်းပြည်ရဲ့လိုအပ်ချက်အနေအထားကြောင့် တပ်က ထိန်းသိမ်းဆိုပြီး ပြန်လုပ်မှာဖြစ်တယ်။ အဲဒါကို အခုအခြေအနေဟာ နောက်ပြန်လှည့်လို့မရတော့ပါဘူးလို့ ပြောတဲ့လူက ပြောတုန်းပဲ။အဆိုးဆုံးက ပြည်ပကျန်တွေ ပြည်တော်ပြန်တွေ ၈၈ ထဲကတချို့ ဗကသဖြစ်မြောက်ချင်တဲ့ ကိုလိုနီခေတ်လှုပ်ရှားမှု ဥဏှောက်ထဲစွဲနေတဲ့ ခေတ်နှောက်ပြန် ကျောင်းသားဟောင်းတချို့နဲ့ မြောက်ထိုးပင့်ကော် အမြဲတမ်း ဆန့်ကျင်နေတတ်တဲ့လူတစ်စုတို့ဖြစ်ပါတယ်။ ဘယ်တော့မှ အကောင်းမမြင်ပေးနိုင်တဲ့လူတွေလည်းရှိပါတယ်။ တခါတလေ အဲဒါမျိုးတွေ ကြားရ ဖတ်ရ မြင်ရဖန်များလာတော့ ကိုမင်းမင်းရေးတဲ့ ကွန်မင့်ကို ထောက်ခံချင်တယ်။ ကိုမင်းမင်းပြောတာမှန်တယ်။ နယ်မှာတော့ စည်းမရှိကမ်းမရှိ နေကြတာတော့ ပြောမိပါတယ်။ ဒီကောင်တွေ စစ်တပ်နဲ့ပဲတန်တယ်လို့လေ။ လူတွေကလည်းလူတွေအလျောက် အုပ်ချုပ်သူကလည်းအုပ်ချုပ်သူအလျောက် ပေါက်လွတ်ပဲစား လုပ်နေကြတာလေ။ ဥပဒေနည်းလမ်းရှိရှိ တရားနည်းလမ်းကျကျ သူ့ဖက်ကိုယ့်ဖက် မျှမျှတတ နေကြ လုပ်ကြကိုင်ကြရင် ဘယ်လောက်ကောင်းမလဲ ခုတော့…ကိုယ်ကရှောင်ပြီး မသိကျိုးကျွံ လုပ်နေရင် ဟေ့ကောင် မင်းကဘာလည်း အရေးမလုပ်တာလား ဆိုတဲ့ လူမိုက်ဆက်ဆံတဲ့နည်းနဲ့ မေးတဲ့လူကရှိသေးတယ်။ အထူးသဖြင့် အစိုးရဌါနဆိုင်ရာတော်တော်များများက ကျင့်သုံးနေဆဲပဲ။ တခါတလေ အဘအားကိုးနဲ့မိုက်တဲ့ကောင်တွေက ပိုဆိုးတယ်။ တပ်ကရာထူးကြီးကြီး ရဲ့ တ၀မ်းကွဲယောက်ဖလို ကောင်မျိုးတွေပေါ့။ ဒါကြောင့် ပြောပါတယ်။ ပြောင်းလဲတယ် ပြောင်းလဲတယ်နဲ့သာပြောနေကြတယ်။ ဘယ်နေရာကပြောင်းတယ် ကောင်းလာတယ်ဆိုတာ မသိပါဘူးဗျာ။ ခုချိန်ထိတော့ အရင်အတိုင်းပဲ နဂိုအတိုင်းပဲ ဆိုတာ ခဏ ခဏပြောနေရတယ်။ စားတုန်း သောက်တုန်း တောင်းတုန်း ဟောက်တုန်း ပြသာနာရှာတုန်းပါပဲဗျာ။ ကိုမင်းမင်းရေ ခင်ဗျားပြောတဲ့လူတွေကိုပဲ အုပ်ချုပ်ခိုင်းရမလိုဖြစ်နေတယ်နဲ့တူတယ်နော်။
Reply Aung Kyaw Nyunt September 16, 2012 - 11:56 am Well analyzed the situation of Myanmar, Dr Francis Fukuyama. Thanksalot
Reply Yannaing September 17, 2012 - 2:50 am Very good analysis Dr. Fukuyama and very good translation by Irrawaddy.
Reply ဇော်ဇော်အောင် September 18, 2012 - 8:11 pm ကိုမင်းမင်း နဲ့ကိုမောင်မောင် နှစ်ဦးလုံးရေးသါးမှူကမှန်တယ်ဗျာ။လျော့ရေးတယ်လို့ထင်တယ်၊မှန်လွန်းလို့။
Reply wai lin han October 26, 2012 - 1:01 pm လုံးဝအမှန်ဆိုတာအစ်ကိုတို့ရဲ့စကားတွေပါပဲ။တကယ်ကိုပဲဗမာတွေဟာအင်္စကိုတို့ပြောသလိုပါပဲ။တွေးမိတိုင်းအသဲနာတယ်၊အမျိုးသာဆဲချင်တော့သည်။